दशैमा कस्तो मासु खाने कस्तो नखाने ? | Chhatapost.com
Home Breaking News दशैमा कस्तो मासु खाने कस्तो नखाने ?
दशैमा कस्तो मासु खाने कस्तो नखाने ?
नेपालमा मनाइने पर्वहरूमध्ये हिन्दुहरूले महान चाड भनेकै बडा दशैं हो । यो पर्वमा ठूलाबडा, मान्यजनको हातबाट रातो टिका र आर्शिवाद थाप्ने र मिठोमसिनो खाने पर्वका रूपमा रहँदै आएको छ । आफूसँग पर्याप्त पैसा नभए पनि ऋण काढेर भए पनि नयाँ लुगा लगाउने र मासुका लागि सिंगै खसी ढाल्ने होडबाजी नै चल्छ । सोही कारण भन्ने गरिन्छ, “दशैं आयो ढोल बजाई, दशैं गयो ऋण बोकाई । ” विशेषगरी मासुका विभिन्न परिकारहरू बनाएर खाने चलन हुन्छ, तर सानो–सानो लापरबाहीले गर्दा दशैं मनाउन भनेर आएका आफन्तजन र पाहुनाहरू बिमारी भएर अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने अवस्थासमेत आउने गरेको छ । सोही कारण दशैंमा मासुका परिकारहरुको सावधानीपूर्वक र सन्तुलित प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।
मासु एक पौष्टिक आहार हो, यसमा १४ देखि २० प्रतिशतसम्म प्रोटिन पाइन्छ । यसमा जिंक, भिटामिन बि, पोटासियमजस्ता तत्वहरू पनि पाइन्छन् । यी तत्वहरू हाम्रो शरीरको लागि एकदमै अति आवश्यक तत्वहरू हुन् । सन्तुलित भोजनमा मासुको प्रयोग अनिवार्य नै मानिन्छ । तर मासुबाट प्राप्त हुने् तत्वहरू त्यति सजिलैसँग भने प्राप्त गर्न सकिँदैन, यदि सही र सन्तुलित ढंगले प्रयोग नगरेको खण्डमा । यदि तपाईं–हामीले राम्रोसँग सुरक्षित ढंगले राख्न नजानेमा त्यही मासुबाट विभिन्न भयानक किसिमका रोगहरु उत्पन्न हुने, सर्ने खतरा रहन्छ । अमेरिका र युरोपका विभिन्न विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता तथा मासु विशेषज्ञहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका क्रममा निकालेको निष्कर्षअनुसारा खानामा दैनिक अत्याधिक रातो मासुको प्रयोगले मानिसहरूको संवेदनशील अंग मुटुमा असर पार्नुका साथै उच्च रक्तचाप निम्त्याउने र क्यान्सरको सम्भावना पनि बढाउँछदछ । सोही अनुसन्धानअनुसार दैनिक धेरै मासु खाँदा शरिरमा भएका विभिन्न बलिया हड्डीहरू कमजोर हुने खतरा रहन्छ, आर्थाइटिस (हाडजोर्नीसम्बन्धी रोग)को सम्भावना अत्याधिक हुन्छ, महिलाहरूमा स्तन क्यान्सरको खतरा हुनुका साथै महिला–पुरुष दुवैमा कोलस्ट्रोलको मात्रा पनि शरिरमा बढ्न जान्छ । जसका कारण इच्छाएको परिकार खानबाट बञ्चित रहनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालका मासु पसलहरूमा भएका लापरवाहीको कारण मानिसहरूमा धेरैजसो ब्याक्टेरियाको संक्रमण, जुकाका लार्भाहरू शरिरमा प्रवेश गर्ने तथा मासुमार्फत विभिन्न खालका रोग सर्ने गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन । फोहर बधशाला, मासुको तयारी र रखबारीमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा विभिन्न किसिमका फ्लु तथा सरुवा रोगहरू सर्ने माध्यम बनेको पाइन्छ । यी र यस्तै कारणहरुले गर्दा विभिन्न किसिमका चाडहरु मनाउने वित्तिकै मानिसहरूको अस्पताल भर्ना हुने संख्या निकै बढेको पाइनछ । चाडबाडका समयमा धेरै ‘फुड प्वाइजन’का बिमारीहरू अस्पताल आउने गरेको वीर अस्पताल, टिचिङ अस्पताल र पाटन अस्पतालको तथ्यांकले देखाउँछ । सही ढंगले मासु र अन्य परिकार नपाउँका, त्यसलाई स्वस्थकर ढंगले नराख्दा खानेकुरामा विषाक्तता बढी खाना प्वाइजनिक हुन पुग्छ र खाएको केही समयभित्रै पेट बटारिने, पेट ढुस्स पर्ने, झाडापखाला चल्ने, अजीर्ण तथा अपच भइ तत्कालै पेट फुल्नेलगायतका लक्षणहरू देखिन थाल्छ । यस्तो भएमा घरमै उपचार गर्नुका सट्टा तत्कालै नजिकको स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गएर जचाइ हाल्नु पर्छ । यस्ता विभिन्न प्रकारका रोगहरुबाट बच्न तपाईहरुको व्यक्तिगत सरसफाई, तपाईंहरुले प्रयोग गर्ने खानेकुरा पकाएका वा काँचो नपाएका खानेकुरा कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने ज्ञानको कमी हो । यसपालिको दशैंमा आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान कसरी राखी आफ्ना पाहुनाको स्वास्थ्यमा समेत कसरी प्रभाव पार्न नदिने हो भन्ने विषयमा केही साधारण कुरामा ध्यान दिन सकिएमा उपचार खर्चका ठूलो जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
दशैंका लागि खसी बोका किन्दा खेरीदेखि नै हामीले केही आधारभूत कुरामा ध्यान दियौं भने मासुबाट सर्ने रोगबाट बच्न सकिन्छ । हेर्दै नाम्ले परेजस्तो, अति दुब्लो, आँखा आवश्यकताभन्दा बढी रसिलो भएको, झोक्य्राएर बस्ने, फनफनी घुम्ने खसी बोका किन्नु हुँदैन, यस्ता लक्षणहरु खसीबोका बिमारी भएको बेला देखाउने गर्छन । अहिले काठमाण्डौं भित्रने खसी बोकाहरुलाई सरकारी स्तरबाटै परिक्षण गरेर रातो र हरियो रंग दलिदिने गरिएको छ । सिंगमा हरियो रंग पोतिएका खसी बोका स्वस्थ हुन भने रातो रंग दलिएका खसी बोका अस्वस्थ छन् । दुई–चार सयको लोभमा अवस्थ्य खसी बोका किनेर ल्याउँदा आफै भोलि बिमारी हुने खतरा बढी रहन्छ । त्यसपछि हामीले खसी बोकाको बध गर्नेदेखि लिएर मासु पकाएर खाने, त्यसलाई भण्डारण गर्ने कुराहरूमा पनि केही आधारभूत जानकारी राख्यौं भने मासुजन्य रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
यसरी मासुबाट रोगहरु स्वस्थ्य शरिरमा सर्दछ ।
कुन मासु खाने कुन नखाने?
– काँचो मासुको परिकार होडबाजी गरेर कुनै पनि हालतमा खानु हुँदैन । किनभने काँचो मासु नै रोगको भण्डार हो । काँचो मासुबाट रोग सर्ने सम्भाबना बढि हुन्छ।-सेफ कमार चालिसे
Previous articleप्रधानाध्यापकले बारम्बार अश्लिल एसएमएस पठाएपछि छात्राले गरिन् आत्महत्या
Next articleआज बडादशैको फूलपाती भित्राइदै